warkii.com » Michael Owen Oo Magacaabay Ciyaartoygii Liverpool U Diiday Inay Lasoo Saxeexato Timo Werner
Michael Owen Oo Magacaabay Ciyaartoygii Liverpool U Diiday Inay Lasoo Saxeexato Timo Werner
Halyeygii hore ee Liverpool ee Michael Owen ayaa rumaysan in Reds ay qoomamayn doonto sababtii ay ula soo saxeexan weyday Timo Werner, waxaanu tilmaamay in Divock Origi aanu beddl wanaagsan u ahayn Roberto Firmino.
Liverpool oo Axaddii 2-0 kaga adkaatay Aston Villa, waxa qaybtii hore la nasiyey weeraryahanka reer Brazil ee Firmino, Kabtan Henderson iyo Gigi Wijnaldum, hase yeeshee kooxda ayaa la’aantood dhaqaaqi kari weyday.
Tababare Klopp ayaa soo geliyey saddexdan ciyaartoyba daqiiqaddii 61aad, waxaana markaas isbeddeshay ciyaarta iyadoo ay laba gool la yimaaddeen, laakiin ciyaartoyda sida weyn loo tabay ee ay la’aantii kooxdu shaqayn weyday ayaa ahaa Firmino oo kubbadihii uu u habaynayay Salah iyo Mane ay meesha ka baxeen.
Owen oo intii ay ciyaartu socotay ka hadlayay telefishanka ayaa farta ku fiiqay bandhigga Origi oo uu tilmaamay inuu yahay mid ka hooseeya heerka looga baahan yahay ciyaartoyda Anfield, waxaanay fikirkaas isku waafaqeen Ian Wright.
“Waan ku raacsanahay Wrighty.” Ayuu Owen si kooban u yidhi isaga oo ka hadlayay heerka tayada Origi.
Owen waxa uu intaas kaddib sheegay in heshiiska muddada dheer ee uu Liverpool dhowaanta u saxeexay Origi, inuu sabab u noqday inay iska daayaan weeraryahanka Timo Werner oo ay u dhowaayeen inay ka hor qaadaan Chelsea oo markii dambe kaga guuleysatay, waxaanu yidhi: “Taas ayaa u diidday inay ciyaartoy cusub doontaan oo ay lacag badan ku kharash gareeyaan weeraryhan beddel suge ah.
“Timo Werner way iska caddayd in lala xidhiidhiyey Liverpool, kaddibna uu tegay Chelsea. Waxay ila tahay in ciyaartoy noocaas ah uu ku wacnaan lahaa Liverpool.”